Tafakatra 106 ireo matin’ny valanaretina: miisa 78 ireo lavon’ny covid-19, ny volana jolay teo | NewsMada
Tafakatra 106 ireo matin’ny valanaretina: miisa 78 ireo lavon’ny covid-19, ny volana jolay teo
Nifarana, omaly, ny volana jolay. Navesatra ny antontanisa ho an’ireo matin’ny co­ronavirus tamin’iny volana iny. Namoizana olobe maro hatrany amin’ny 78, hatra­min’ny omaly ka nahatafa­katra ny antontanisan’ireo lavo ho 106. Nahitana mpitondra fivavahana maromaro, ny mpanao fanatanjahantena, ny manamboninahitra, ny mpiasan’ny fahasalamana… Volana mainty tanteraka iny nivalona iny. Nahafatesana olona miisa 78, nanomboka ny 1 jolay ka hatramin’ny omaly 31 jolay amin’ireo maty miisa 106.
10 ireo namony ny ainy tao anatin’ny iray andro
Anisan’ny antontanisa tena nisongadina tamin’izany ny 17 jolay teo. Nahatratra 10 be izao ireo indray namoy ny ainy. Nihena izany taorian’io fa nanodidina ny efatra ka hatramin’ny enina isan’andro izany. Nihoatra ny 100, izany hoe miisa 105 ireo lavon’ny coronavirus, ny alakamisy teo. Nametraka antsika ho anisan’ireo firenana ahitana matin’ny coronavirus eo anelanelan’ny 100 hatramin’ny 200 aty Afrika. Anisan’izany ny any RDC, Senegal, Zambia ary Maoritania. Nanomboka ny 28 jolay kosa no efa ni­hoatra ny 10 000 ny isan’ ireo nifindran’ny codi-19. Tafakatra 10 104 izany.
Tafiditry ny coronavirus ny faritra 21 sy ny distrika 61
Tsy vitan’izany fa efa ta­fiditry ny coronavirus, na­nomboka ny volana jolay teo ny faritra 21 amin’ireo 22 sy ny distrika miisa 61 amin’ ireo 119 manerana ny Nosy.
Etsy an-daniny, mbola lohalaharana amin’ny hamaroan’ireo nifindran’ny valanaretina sy ny maty ary koa ny « forme grave » ny eto Ana­lamanga. Anisan’izany ireo tranga vaovao, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Miisa 77 ny avy eto Anta­na­narivo amin’ireo nifindran’ ny valanaretina 120. Mana­raka azy eo ny any Bongo­lava misy 20 raha 11 ireo any Alaotra Mangoro. Any Ma­tsiatra Ambony ny fito raha telo ny any Diana ary iray avy ny any Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany.
Eto Analamanga ireo marary mafy 68 amin’ireo 83
Mbola ivon’ireo marary mafy koa ny eto Analamanga. 68 amin’ireo « forme grave » 83 avy eto avokoa. Mitsin­jara ho 40 etsy Befelatanana, 13 eny amin’ny HJRA. Sivy kosa ny eny Anosiala raha roa avy ny eny Fenoarivo sy Andohatapenaka ary ny etsy amin’ny Homi. Manampy ireo ny any Vakinankaratra sy Matsiatra Ambony, samy dimy avy. Roa ny any Boeny ary iray avy kosa ny any Atsimo Andrefana sy Atsina­nana ary Bongolava.
Tetsy Anosiala ilay iray lavon’ny covid-19, omaly
Na izany aza, miisa 346 ireo sitrana ka tafakatra 7 807 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasi­tranana. Miisa 2 955 kosa anefa ireo mbola manaraka fitsaboana sy arahi-maso ny toe-pahasalamany ary miisa 10 868 ireo nifindran’ny va­lanaretina, hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty.